Sidee loo helaa adeega talabixinta SEO ee saxda ah ee sameynta Google ku faraxsan?
Sidaa daraadeed, waxaan isku dayi doonaa in aan dib u eegno - ma suurtagal in la shaqaaleeyo shirkad wacan, hay'ad buuxda, ama qof kasta oo bixiya adeegyada la-talinta SEO ee hal ujeedo kaliya - waxaan doonayaa inaan Google ku farxo ka dib. Haa, waxaan dhawaan la weydiiyay su'aasha. Oo waxaa loo dhigay qaab aan caadi aheyn, waa inaan aqbalaa ka dib. Haa, Haa, waxaan ahay halgan halkan, majiraan. Su'aalahan muuqata ee la yaabka leh waxay sameeyaan dareen macquul ah, badanaa la dayacay qaybta libaax ee kuwa websaydhka ama milkiilayaasha bogga kuwaas oo aan si lama filaan ah u heleynin inay baahi weyn u qabaan qaar ka mid ah boosteejooyinka. Waxay badanaa u baxaan khibradda qaar ka mid ah xirfad-dejinta u qalantaa oo kaliya si loogu sameeyo taxadar deg-deg ah oo lagu muujinayo qiimayntooda hoose ee liiska natiijooyinka raadinta. Ugu yaraan waxay aaminsan yihiin habkaas. Ku soo noqoshada su'aasha ugu horreysa ee ku saabsan adeegyada wanaagsan ee la-talinta SEO ee la filayo qofka ayaa ah inuu ku fiicnaado iyo hagaajinta bogagga shabakadda, kaliya inuu sameeyo Google ku faraxsan. Xasaas la'aan Dhallin? Waxna kuma laha! Codsiga qariibka ah wuxuu cadeeyay in uu yahay mid aad u wanaagsan, ugu yaraan nalaga rabo inaan sameyno wax walba oo ku saabsan naqshadeynta raadinta xitaa faham badan.
Maqnaanshaha isbedelka. Miyaad u qabataa dadka ama mashiinka?
Trick waa inay si fiican u taageeraan bogagga shabakada leh taageerada saxda ah ee ka timaadda adeegyada SEO Consulting macnaheedu waa samaynta boggaaga si khaas ah oo user-saaxiibtinimo. Dhinaca kale, marka la eego dhibicdani waa mid si joogto ah u dayacday dad badan. Intaa waxaa dheer, mararka qaarkood waxay aadaan sida ugu fog si ay diiradda ugu saaraan kaliya dhinacyada farsamooyinka farsamada ee keliya, sidaas darteed waxay leeyihiin boggooda mashiinka akhriska ee raaxada leh. Si kastaba ha ahaatee, ma hubo taas. Sidaa darteed, tixgelinta adeegyada la-talinta SEO, waxaa jira miisaan macquul ah oo u dhexeeya waayo-aragnimada dadka isticmaala, iyo "sameynta Google ku faraxsan. "Laakiin sidee suurtogal u noqon karnaa inaan helno labadaba mar uun? Aan isku dayno in aan qiyaasno hab-qabsi oo lagu doorto bixiyaha adeeg-raadinta saxda ah ee boggaaga. Sida waayo-aragnimo user wanaagsan, wax walba oo ku saabsan waa ugu yaraan la fahmi karo. Laakiin waa maxay su'aalaha ay tahay in aan ku weydiisano shaqaaleynta saxda ah ee matoorada raadinta ku faraxsan waqtiga? Aan isku daynaa in aan aragno sida suurtagalka ah u dhici karto.
Hadafyada wanaagsan ee hore ee SEO
Ka fikir inaad la fariisato dhamaan shaqaalahaaga, iyo sidoo kale madaxaaga ama guddiga kooxda, ama qof kasta oo aad la shaqeyso. Xaqso Ka dibna aan isku dayno inaan qaabeyno ujeedooyinka asaasiga ah ee aad rabto inaad la xiriirto adeegyada la-talinta SEO. Ka hor intaanad bilaabin, maxaad u rabi laheyd hadda inaad hesho Mashiinka Raadinta ee Mashruuca hadda? Maxaad u rabtaa inaad hesho rikoodhka caadiga ah waa SERPs ee loogu talagalay ereyada ugu muhiimsan ee tartan tartiib tartiib tartiib tartiib ah? Sidee ayaad u isbeddeleysaa guusha dhabta ah ama guul darridaada dhameystiran? Hawlahaas oo kale, oo aan ka fakarin sida Greens, waxaan soo jeedinayaa isticmaalka nidaam sahlan - aynu isku dayno inaanu miisaanno ujeedooyin wanaagsan si aan si macquul ah ugu dhigno adeegyo talobixin SEO ah, oo ka soo horjeeda ujeedooyinka ugu caansan ugxan-la'aanta marxalad wakhti kasta.
Waxaan rabaa inaan ka helo gaadiid ka badan dadkan, kuwaas oo xiiseynaya mowduucdayda. Waan hubaa inay raadinayaan. Oo waxaan u baahanahay website-kayga si aan wax uga qabano dad badan oo badan oo ku fikiraya. Taasi waa sababta aan ugu baahanahay gaadhi weyn oo aan horay uga soo daawaday dhagaystayaashii hore iyo dhammaanba;
Anigu waxaan sameeynayaa sida ugu fiican inaan kor ugu qaado dakhliga shirkada. Kooxdayadu waxay isku dayayaan inay ku guuleystaan ​​iibsiyo cusub oo cusub. Waxaan aamminsanahay in adeega talobixinta SEO uu yahay awood awood leh oo weyn si loo riixo iibkeenna;
Waxaan raadineynaa dhageystayaal suuqa oo ballaaran. Hadda kooxdayadu waxay ka shaqeyneysaa qayb ka mid ah qaybinta ugu weyn ee tijaabooyinka bilaashka ah, saxiixyada, iyo lacag la'aan;
Waxaan u baahanahay inaan dhisno shirkad magac leh oo magac leh oo magac leh. Waxanu haynaa waxyaabo badan oo dib u eegis wanaagsan, haddana wali waxay ka hooseysaa hoos-u-dhaca jawaab-celinta bukaanka ama kuwa xun. Waxaan dooneynaa in aan riixno xaqiiqda saxda ah, oo laga yaabo inay ka takhalusaan kuwa ugu xun. Sida aan ognahay dad badan ayaa xiiseynaya magaca calaamadeena ama alaabada calaamadeysan.
Waxaan raadinayaa taraafikada, gaadiidka waawayn, xitaa gaadhi weyn. Waxaan u baahanahay qiimaha oo dhan, sababtoo ah qof walbaa wuu rabaa, Google sidoo kale wuu jecel yahay. Taasi waxay noqon laheyd qalad aad u xun, gool looma baahna. Dhamaantiis, waxaad ka fiicnaan laheyd inaad tiraahdo tirakoobyada taraafikada raadinta. Haddii aad u aragto in aad filayso inaad si wanaagsan ugu beddeshay inaad ku wado dakhliga shirkadda, ama wax sidaas oo kale ah - adiga kuu fiican. Wanaagsan, taasi way qaban doontaa;
Waxaad ka fekereysaa rikoodhka raadinta ee la gooyey. Waa in aanad marnaba ku qorin liiskaaga ujeedooyinka, wax yar ka yari si aad uga fogaato "bartilmaameed" oo ah dhinaca sare. Sida caadiga ah, waa calaamad siman oo xun oo loogu talagalay adeegyada la-talinta SEO. Inta badan, bixiyaha noocaas ah waa inuu ahaado kaliya farabadan ganacsi daanyeer ah. Waxaan ula jeedaa in ay aad u badan tahay in aad aragto degdeg ah, weli wali gaaban kor u xajmiga ee darajo iyada oo loo marayo qaar ka mid ah caqabado farsamo, ama god, Black Hat SEO badanaa la yimaadaa bixinno aan caddaalad ah sida;
Shirkaddaadu waxay u muuqataa inay ku lug leedahay tartan suuqa ah. Waxaa jira hal naadi oo gaar ah oo loogu talagalay kelmado gaar ah oo muhiim ah oo aad rabto inaad ka takhalusto dhammaan kharashka. Haddii aad u sheegto ujeedada dhabta ah ee shirkadda, waxaad mar labaad u dhaqaajineysaa hab khalad ah. Waa inaad iloobaa waxyaalahan aan waxba ahayn. Keliya weydii naftaada - miyuu si toos ah ugu wadi karaa dakhliga soo-gelinta dakhliga, ama ugu yaraan toos u ah bartilmaameedyada ururka? Haddii aad ka shakisan tahay, xiitaa wakhti, taasi ma ahan hadaf fiican;
Waa kuma kan. Waqtiga si aad u hubiso
Hagaag, waxaynu ka boodi doonnaa qeybta labaad ee "dhacdooyinka qiyaaliga ah", sida erayada caadiga ah ee malabyada iyo khudbadaha codka leh ee xitaa bixiyeyaasha xitaa kuwa hagaagsan ayan lahayn wax ku saabsan adeegga talo bixinta SEO. Aynu bilowno in aynu u gudubno gabagabeynteena oo aanu samayno doorasho - ama la macaamilno dadkaas ama ka tagaya goobta shirarka ee ogeysiis gaaban. Ka dib markaan dhan, waxaan rumaysanahay in qaabka gaaban ee hoose uu si fudud u shaqeyn karo tan.
Jeegaga deg deg ah ee ku saabsan doodahaaga, waxaan loola jeedaa inaad si fudud u baran kartid fahamka shirkadooda raadinta raadinta iyo habka SEO. Miisaaniyeyaashu ma heli doonaan fursada, iyo sidoo kale hay'adaha aan caddaalad ahayn, ama bixiyeyaasha aan walwalka lahayn ee adeegyada la-talinta SEO. Isku day inaad adigu garatid oo aad u gariiriso adiga oo waydiinaya asaasiga ah, sida "Hey, waxaan kaliya rabay inaan ogaado sida Google u raadineyso natiijooyinka raadinta, maxaad u qaban kartaa aniga aniga?". Haddii wadahadalku uu weli socdo si habsami leh, iyada oo aan la sheegin xitaa wax yar oo niyadjab ah, taas waa weyn. Dhamaan waxaad u baahan tahay inaad maqasho waa jawaabta kaliya ee saxda ah, sida "Haa, waa kaliya Google, sidan ayaa ah sida ay u sameeyaan walxaha. Oo halkan waa sida khubarada ay u garanayaan xadhkaha, halkan ayaana ah sida kooxdayada loo isticmaalo si ay u qabato shaqada, iyo halkan waa waxa aan si macquul ah u filan karno mustaqbalka fog ". Miyaad dareentay qaabka ku haboon ee wada hadalka toosan? Kadib waxaad xor u tahay inaad tixgeliso musharaxnimadooda si aad u sameyso dhamaan wax-qabadkaada raadinta, xitaa haddii aadan fikrad labaad Source .